Shiinuhu wuxuu tijaabiyaa dheef-shiid kiimikaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabooyinka Dheefshiidka
Tijaabooyinka dheefshiidka waa si looga hortago cudurrada hab-dhiska dheefshiidka. Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha habka dheef-shiidka, calaamadaha bukaan-socodka ee cudurrada hab-dhiska dheef-shiidka ayaa inta badan la socda calaamado kale oo nidaamsan ama hab-dhiska, kuwaas oo qaarkood ay ka yar yihiin kuwa hababka kale. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
Si looga hortago cudurrada hab-dhiska dheefshiidka, baaritaanno dhammaystiran oo dheefshiidka ayaa aad muhiim u ah, marka hore, waa inaan fiiro gaar ah u yeelannaa xaaladda guud ee bukaanka, haddii ay jiraan cagaarshow iyo nevus caaro, haddii qanjidhada qanjidhada ee clavicle ay bararan tahay. , haddii uu jiro xididka varicose ee laabta iyo derbiga caloosha iyo jihada socodka dhiigga, iyo haddii wadnaha iyo sambabada ay yihiin kuwo aan caadi ahayn. Baaritaanka caloosha waa inuu noqdaa mid qoto dheer oo faahfaahsan, calool-xanuun caloosha ah, mowjad peristaltic ah, caajisnimo wareega, jilicsanaanta, xanuunka soo noqnoqda, qallafsanaanta muruqa caloosha, dhawaaqa biyaha gariir, dhawaaqa mindhicirka; Haddii cuf la helo, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado meesha ay ku taal, qoto dheer, cabbirkeeda, qaabka, qallafsanaanta, xaaladda dusha sare, haddii ay jirto dhaqdhaqaaqa, jilicsanaanta, garaaca wadnaha, iwm. Baaritaanka beerka iyo beeryarada ayaa aad muhiim u ah. waa in fiiro gaar ah loo yeesho cabbirka, adkaanta, cidhifka, dusha sare, iyo joogitaanka jilicsanaanta. Ka digtoonow inaad ku khaldami saxarada saxarada ee sigmoid colon, kaadi haysta oo buuxsamay, laf dhabarta lordotic, aorta caloosha, kelyaha, iyo ilmo-galeenka uurka leh ee tirada badan. Intaa waxaa dheer, in adipose hypodermic qofka khafiifka ah ee ka maqan, derbiga caloosha ayaa muujin kara xididka, waa inuusan samayn xididka albaabka si qalad ah cadaadis sare; Joogitaanka mowjadaha peristaltic ee bukaanka daciifka ah iyo derbiga caloosha ee jilicsan waa in aan loo tixgelinin xannibaadda mindhicirka. Baaritaanka faraha dabada ee cudurrada habka dheef-shiidka iyo bukaanka da'da ah waa in ay noqdaan kuwo joogto ah oo aan la iska indho-tirin.
Tijaabooyinka dheefshiidka oo ay ku jiraan baaritaanka dhiigga sixirka saxarada iyo kaadida saddex shaybaarka xiniinyaha ayaa ah habab baaritaan oo fudud oo qiimo leh. Falanqaynta dareeraha caloosha iyo dheecaanka duodenal waxay ku siin karaan aasaaska ogaanshaha cudurrada caloosha iyo biliary. Shaqada beerka waxay hubisaa shay aad u badan, taasoo la macno ah mid kasta oo ka duwan, ka jawaab doorashada ku habboon. Cytology waxay caawisaa ogaanshaha kansarka hunguriga, caloosha iyo mindhicirka. Ogaanshaha calaamadaha burooyinka, sida AFP, CEA iyo CA19-9, ayaa xoogaa qiimo leh. Autoantibodies sida ka hortagga-mitochondrial antibodies ayaa waxtar u leh ogaanshaha cudurrada difaaca jirka ee dheefshiidka.
Qalabka Tijaabada degdega ah ee H.pylori
Qalabka tijaabada degdega ah ee caafimaadka H.pylori: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha hab-dhiska dheefshiidka, astaamaha bukaan-socodka ee cudurrada hab-dhiska dheefshiidka waxaa inta badan la socda calaamado kale oo habdhiska ama habdhiska, kuwaas oo qaarkood aan caan ahayn kuwa hababka kale. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
Rotavirus Adenovirus (Sacarada) Qalabka Tijaabada Degdega ah
Rotavirus Adenovirus (Seerka) Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Combo: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha habka dheef-shiidka, calaamadaha bukaan-socodka ee cudurrada hab-dhiska dheef-shiidka ayaa inta badan la socda calaamado kale oo habdhiska ama habdhiska, kuwaas oo qaarkood aan caan ahayn kuwa hababka kale. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
Baaritaanka Kahortagga Jirka ee H.pylori
Baaritaanka H.pylori antibody: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha habka dheef-shiidka, calaamadaha bukaan-socodka ee habka dheef-shiidka waxaa badanaa la socda calaamado kale oo nidaamsan ama hab-dhiska, kuwaas oo qaarkood ay ka yar yihiin kuwa hababka kale. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
99% Xirfadle Sax ah oo sax ah H Pylori Igg Kaasset-ka Tijaabada Dhiiga Kahortagga Jirka
99% Professional Accurate h pylori igg antibody cajalad cajalad: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha habka dheefshiidka, calaamadaha bukaan-socodka ee habka dheef-shiidka waxaa badanaa la socda calaamado kale oo habdhiska ama habdhiska, kuwaas oo qaarkood aan caan ahayn kuwa kale. nidaamyada. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
Degdeg Hal Tallaabo H Pylori Antigen Strip
Hal tallaabo oo degdeg ah oo h pylori antigen test strip: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha hab-dhiska dheefshiidka, calaamadaha bukaan-socodka ee cudurrada hab-dhiska dheefshiidka waxaa inta badan la socda calaamado kale oo habdhiska ama habdhiska, kuwaas oo qaarkood aan caan ka ahayn kuwa hababka kale. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
99% Sax ah H Pylori Antigen Dhiiga Saxarada Dhiiga Xadhkaha Tijaabada
99% sax ah h pylori antigen dhiiga saxarada shaybaadhka: Marka lagu daro calaamadaha iyo calaamadaha hab-dhiska dheefshiidka, calaamadaha kiliinikada ee cudurada habka dheefshiidka ayaa inta badan la socda calaamado kale oo habdhiska ama habdhiska, kuwaas oo qaarkood aan caan ahayn kuwa kale. nidaamyada. Sidaa darteed, kaliya in si taxadar leh loo ururiyo xogta bukaan-socodka, oo ay ku jiraan taariikhda caafimaadka, calaamadaha jireed, baaritaannada joogtada ah iyo natiijooyinka kale ee baaritaanka caawinta ee la xidhiidha, waxaan ku heli karnaa ogaanshaha saxda ah ee falanqaynta iyo iskudhafka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabooyinka Dheefshiidka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabooyinka Dheefshiidka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabooyinka Dheefshiidka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.